Kurwiswa Zvine Utsinye kweZvapupu zvaJehovha | Bhuku Regore ra2015
Borbonio Aybar akabhabhatidzwa musi wa19 January 1955, basa redu parainge rakabhanwa. Pashure pekunge abhabhatidzwa akaitisa zvidzidzo zveBhaibheri mutaundi reMonte Adentro uye muguta reSantiago. Zvapupu pazvakanga zvava kunamata zvakasununguka, muna 1956, vamwe vevaidzidza naHama Aybar vakabhabhatidzwa, kusanganisira mudzimai wavo.
Pakati pemwedzi waJuly 1957, vakuru vakuru vehurumende vakaungana muguta reSalcedo kuti vatsvagire Zvapupu mhosva. Hama Aybar vakati, “Francisco Prats-Ramírez ndiye aiva mukurukuri mukuru. Prats-Ramírez akati, ‘Mumazuva mashomanana chete, vachatsakatiswa.’” Musi wa19 July 1957, pangopera mazuva mashomanana, mapurisa akasunga Zvapupu zvaJehovha zvose zvaiva muBlanco Arriba, El Jobo, Los Cacaos, neMonte Adentro.
Hama Aybar vakati, “Ndaiva mumwe wevakasungwa. Takaendeswa kumahofisi makuru emasoja kuSalcedo. Patakangosvika ikoko, ndakabva ndarohwa nemukuru wemasoja ainzi Saladín. Ainge akaita kufuta nehasha paaitaura nesu achitityisidzira. Takazomiswa mumitsetse miviri, wevarume newevakadzi. Magadhi akatanga kurova varume nevakadzi nezvimiti, uku achiti, ‘Ndiri muRoma, ndinouraya.’”
“Ndakaverenga Bhaibheri, uye ndinoziva kuti Jehovha ndiMwari”
Hama Aybar vakanzi vabhadhare faindi uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitatu. Vakaenderera mberi vachiti: “Panguva yatainge takavharirwa, mumwe mukuru wemasoja ainzi Santos Mélido Marte akatishanyira. Akatiudza kuti: ‘Ndakaverenga Bhaibheri, uye ndinoziva kuti Jehovha ndiMwari. Hapana chamakaita chakakodzera kuti muvharirwe mujeri, asi hapana kana chandingakuitirai nekuti mabhishopu eRoma ndiwo akaita kuti musungwe. Mabhishopu iwayo kana kuti bhosi Trujillo ndivo vangatokwanisa kuita kuti musunungurwe.’”
“Saka Ndiwe Bhosi Wavo Nhai?”
Pakati pevakasungwa paivawo nemwanasikana waFidelia Jiménez nevanasikana vaviri vemunin’ina wake. Vose vari vatatu vakanga vadzidza Bhaibheri naFidelia Jiménez. Kunyange zvazvo Fidelia asinawo kusungwa pakutanga, akazviendesa kuvakuru vakuru kuti aiswewo mujeri kuitira kuti akurudzire vaya vainge varimo. Panguva iyoyo mukuru wemasoja aiva nechinzvimbo chepamusoro-soro ainzi Ludovino Fernández, uyo aizivikanwa nekuzvikudza uye neutsinye, akaenda mbune kujeri kwacho. Akaita kuti Fidelia aunzwe kwaari ndokumubvunza kuti, “Saka ndiwe bhosi wavo nhai?”
“Aiwa,” akapindura kudaro Fidelia. “Imi mose ndimi mabhosi.”
Fernández akabva ati, “Saka ndiwe mufundisi.”
“Aiwa,” akapindura kudaro Fidelia. “Jesu ndiye mufundisi.”
“Hausiwe wakakonzera kuti vanhu vese ava vasungwe here?” akabvunza kudaro Fernández. “Ndiwe wakavadzidzisa, handiti?”
“Aiwa,” akadaro Fidelia. “Bhaibheri ndiro rakaita kuti vanhu ava vasungwe. Vari kuita zvavakadzidza muBhaibheri.”
Panguva iyoyo, Pedro Germán naNegro Jiménez, uyo aiva hanzvadzi yaFidelia, vakapfuura nemukoridho. Vaibviswa kwavainge vakavharirwa vari voga vachiendeswa kwaiva nevamwe. Sheti yaNegro yainge yakazara ropa asi rainge raoma, uye ziso raPedro rainge rakazvimba chaizvo. Fidelia paakaona kuti vakanga varohwa zvakaipa, akabvunza mukuru wacho wemasoja kuti, “Ndiwo mabatiro amunoita vanhu vakanaka, vakatendeseka, uye vanotya Mwari nhai?” Fernández paakaona kuti akanga asingakwanisi kutyisidzira Fidelia, akaita kuti adzorerwe kwaainge akavharirwa.
Vashumiri vaJehovha vakavimbika vaifanira kuramba vakashinga pavaitambudzwa kudaro, uye ndizvo zvavakaita! Kunyange vakuru vakuru vehurumende vakaonawo ushingi hwavo. Somuenzaniso, musi wa31 July 1957, Luis Arzeno Colón, mukuru mukuru anoona nezvekuchengeteka kwapurezidhendi, akachema-chema achiti: “Kunyange zvazvo mutemo uchangobva kudzikwa neParamende uchitaura kuti zviri kuitwa nekapoka aka kanozivikanwa seZvapupu zvaJehovha hazvisi pamutemo, vakawanda vekapoka kacho vari kuramba vachizviita.”